Madaxweyne Trump oo sheegay in Sacuudiga uu cawaaqib adag la kulmi doono hadii ay cadaato wariyaha la la’yahay – SHABAKADA HIIRAAN XOG
HomeArimaha BulshadaMadaxweyne Trump oo sheegay in Sacuudiga uu cawaaqib adag la kulmi doono hadii ay cadaato wariyaha la la’yahay
Madaxweyne Trump oo sheegay in Sacuudiga uu cawaaqib adag la kulmi doono hadii ay cadaato wariyaha la la’yahay
Hiiraan Xog, BBC-da ayaa ogaatay in waddamada Britain iyo Mareykanka ay suurtagal tahay in ay qaadacaan shirweyne dhaqaalaha iyo maalgashiga ku saabsan oo la filayo in bishan uu ka furmo dalka Sucuudiga, sababo la xirira arrinta weriyaha Sucuudiga u dhashay ee la la’yahay meel uu jaan iyo cirib dhigay.
Waxaa sidoo kale soo baxaya in waddamada reer galbeedka intooda badan ay ka hadleen arrinta weriye Jamal Khashogg isla markaana ay si wada jir ahi u soo saareen warbixin qoraal ah oo ay ku cambaareynayaan dilka la sheegay in Sucuudigu uu u geystay weriyahaasi.
Samer Shehata oo ah bare-sare oo arrimaha bariga dhexe ka dhiga jaamacadda Oklahoma ayaa BBC-da u sheegay in qaadacadda shirkaasi uu miro dhal noqonayo waa haddii la xaqiijiyo eedeymaha ka dhanka ah Sucuudiga.
Madaxweyne Trump ayaa mar sii horreysay sheegay in Mareykanku uu “ciqaab adag” marsiin doono Sacuudi Carabiya waa haddii buu yiri la xaqiijiyo in Boqortooyada Sacuudi Carabiya ay mas’uul ka aheyd dhimashada weriye Jamal Khashoggi.
Wareysi uu Madaxweyne Trump siiyay warbaahinta CBS News ayuu ku sheegay in haddii ay arrintaasi run tahay oo dhab ahaantii la dilay weriye middaasi waa wax “laga argagaxo oo laga yaqyaqsiyoodo”.
“Xogta kama dambaysta ah ayaannu heli doonnaa ciqaab adag ayaana jiri doonto,” ayuu yiri.
Goor sii horraysay madaxa Qaramada Midoobay ayaa waxa uu dalbaday in “runta laga sheego” weriyaha u dhashay dalka Sucuudi Carabiya, Jamal Khashoggi, ee la la’yahay.
Xoghayaha Guud ee Qaramada Midoobay Antonio Guterres ayaa BBC-da u sheegay inuu ka cabsi qabo inay joogto noqoto in sidaas oo kale dad kale loo waayo misana ay caadi iska noqotaba.
DAAWO SAWIRO:- Wasiirka waxbarashada XFS oo shir uga qeyb galay dalka Morocco
Madaxweynaha Soomaaliya oo amray in loo gurmado dadkii ku dhawacmay qaraxii ka dhacay Baydhabo